Nabadsugida oo ku ceeboowday Gaari Kaarib ah oo ay 4 jeer soo bandhigeen | shumis.net
Home » Layaab » Nabadsugida oo ku ceeboowday Gaari Kaarib ah oo ay 4 jeer soo bandhigeen
Nabadsugida oo ku ceeboowday Gaari Kaarib ah oo ay 4 jeer soo bandhigeen
Fashilka haysta hay’adaha amaanka DF gaar ahaan hay’ada Nabadsugida, ayaa gaaray ineey 4 mar soo bandhigaan Gaari Kaarib Qalin ah oo ay iyagu Qaraxyo kasoo buuxiyeen.
Halkaan ka aqriso Taariikhda 4ta mar ee halkaan Gaari ee Kaaribta ah ay NISA soo bandhigtay:
1-Bishii June 24-keedi ayay ahayd markii ay Hay’ada NISA soo bandhigtay Gaarigaan Kaaribta Qalinka ah & Fuusto laga soo buuxiyay walxaha Qarxa.
2- Bishii July 24-keedi, ayay sidoo kale Hay’ada NISA isla Kaaribtii Qalinka ahayd iyo Fuustadii qaraxa laga soo buuxiyay soo bandhigeen, waxeeyna markaas warsaxaafadeed ay hay’ada soo saartay oo lagu baahiyay warbaahinta Doowlada lagu sheegay, in la qabtay Gaari qarax laga soo buuxiyay oo la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacabka Muqdisho.
3-Bishii Augusto 1-deeda ayay markii sadexaad NISA soo bandhigtay isla gaarigaan Kaaribta Qalinka ah, waxeeyna sheegtay hay’adu in laga soo qabtay Wado hormarta Xeebta Liido.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Xalane ayaa sheegay in gaarigan ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa, isla markaana la doonayay in shacabka lagu dhibaateeyo.
“Gaarigan wuxuu ahaa gaari kaarib ah oo qalin ah, sida aad arkeysaan waxaa ka buuxay waxyaabaha qarxa oo shacabka la rabay in lagu dhibaateeyo”ayuu yiri Afhayeenka Gobolka Banaadir.
4- Augusto 28 oo ku beegneyd shalay ayay sidoo kale NISA soo bandhigtay isla gaarigii Kaaribka iyo Fuustadii oo lagu soo kordhiyay Dhalooyin ay ka dhamaadeen Cabitaanada COCA COLA iyo Faanto, waxeeyna sheegeen ineey kasoo qabteen agagaarka iskuulka Xaawa Taako ee Degmada Xamar weyne.
Aqristoow hadii uu shaki kaaga jiro warbixintaan dabagalka ah ee aan ka diyaarinay fashilka iyo ceebta haysta Hay’da NISA, waxaad gali kartaa Warbaahinta ku hadasha afka Doowlada sida SONNA iyo Radio Muqdisho, waxaadna waxaadna ka heli kartaa taariikhda afarta mar ee lasoo bandhigay Gaarigaan Kaaribta Qalinka iyo Fuustada.
Title: Nabadsugida oo ku ceeboowday Gaari Kaarib ah oo ay 4 jeer soo bandhigeen